Ngwá ọgwụ, igwe na-ere ihe, igwe na - eburu ya - Yidao
Ihu igwe na-eme ihu
Ngwa eji emeghe ihe
Capsule na-agụta igwe na-ejuputa igwe
Igwe eji igwe eji ede ihe
Igwe na-ahụ maka ihe eji akpụ akpụ Capsule
Ngwunye mkpuchi Capsule
Ngwunye kaadi mkpuchi blister
Ngwunye akpa nke Rotary nyere
Ngwa nkwakọ ngwaahịa akpaaka
Ngwaọrụ eji akara akpaaka
Okpukpo igwe kpo oku
Ihe eji emechi ihe cellophane
Mpempe akwụkwọ pillow
Ngwongwo ngwongwo plasticine
Wet ehichapu igwe
Igwe akụkụ anọ na-etinye ihe eji etinye ihe
Productdị ngwaahịa erutela GMP
Bt-260 Igwe na-akpụ akpụ Cellophane
Hụ ngwa ahịa ọzọ >
Akpa uwe otu akpa na-abụghị Wet Tissue
Bt-200 akpaaka atọ Cellophane…
Akpaaka Akpaaka Akpaaka
Tụkwasịnụ anyị obi, họrọ anyị
Nkọwa dị nkenke ：
E guzobere Rui'an Yidao Machines Co., Ltd. na 2008, ọkachamara na mmepe, mmepụta, ahịa na ọrụ nke ọgwụ na ngwungwu; ụdị ngwaahịa a na-ekpuchi igwe na-ahụ maka mbadamba mbadamba, igwe na-eme ka ihe dị n'ime, igwe na-agụta agịga, igwe mkpuchi igwe mkpuchi nke aluminom-plastik, ụdị ọkpọdụ, igwe mkpuchi, igwe akara, igwe nzere, igwe na-enye akara, igwe na-akpọ ihe. Ngwaahịa erutela ogo GMP.
EGO & EGO NA-EGO
Nyochaa nsogbu dị adị na njikwa na njikwa ngwaọrụ
(1) nhọrọ akụrụngwa. Enwere nsogbu ụfọdụ na nhọrọ nke ọgwụ ọgwụ, dịka nhọrọ site na ahụmịhe (na-enweghị mgbako, ma ọ bụ ụkọ data ezughi oke), ịchụso ìsì, na nyocha zuru ezu nke data anụ ahụ, nke metụtara oke ...
Prekpachara anya maka ịchụpụ na mgbakọ nke ngwa igwe ọgwụ
I. Nkwadebe nrụpụta usoro tupu ịchụpụ A. mpaghara a na-arụ ọrụ kwesịrị ịdị mbara, na-enwu, na-adị ọcha ma dị ọcha. B. A na-akwado ngwa ọrụ ndị zuru oke na nkọwapụta kwesịrị ekwesị. C. Kwadebe nguzosi ahu, nkerisi ya na otite mmanu maka ebumnuche di iche.
Ngwọta maka njikwa akụrụngwa ọgwụ na nsogbu mmezi
(1) itinye "usoro injinịa bara uru" ịzụta akụrụngwa, usoro ndị akọwapụtara dị ka ndị a. Kọwaa ihe achọrọ, kpebie ịhọrọ ma zụọ akụrụngwa - ozi ụlọ ọrụ zube (ozi gụnyere: iwu arụmọrụ, ebumnuche njikwa, ihe nrụpụta na ma ...
© nwebisiinka - 2020-2021: Echekwabara ikike niile. Apụta Products - Sitemap - Mobile Site
sizinin Igbo Machine , Pharmaceutical Tablet Press Machine , Erere Press Machine , Automatic obere akpa ndochi Machine , Salt Tablet Press , ọka Igbo mbukota Machine , ngwa ahịa Ihe Niile.